Etu esi eme foto mbu na Instagram | Gam akporosis
Instagram aghọwo oghere ebe anyị nwere ike ịkekọrịta ihe oyiyi anyị na vidiyo na ndị ọrụ, ma ha bụ ezinụlọ, ndị enyi yana ụmụazụ anyị n'ozuzu. Netwọk mmekọrịta emebiri ndekọ nke ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike, yana ihe karịrị 1.000 nde na 2020 ma chọọ ịfe ọnụ ọgụgụ ndị ahụ na 2021.
Iwere foto izizi nke Instagram bụ ịgbaso ndụmọdụ na aghụghọ ole na ole, karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọdịnaya ahụ bụrụ ihe ọkụkụ na ngwa a ma ama. Ndị mmadụ kwesịrị ịdọrọ mmasị ha n'ihe ha hụrụ, ndepụta Instagram ga-abụrịrị ihe ezi uche dị na ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ewu ewu ka oge na-aga.
1 Foto profaịlụ mbụ
2 Nkebi ahịrịokwu mbụ
3 Ọnọdụ izizi maka foto gị
4 Foto izizi nke ndị mmadụ
6 Foto n'ụlọ
Foto profaịlụ mbụ
Foto profaịlụ nke netwọkụ mmekọrịta Instagram ga-abụ kọntaktị izizi nke ndị ọrụ gị, ọ dị mkpa iji dozie onyonyo izizi ma dị iche na ndị ọzọ. Usoro ihe oyiyi ahụ na-abụkarị square na usoro 1: 1, ọ bụ ezie na enwere ngwa na-ekwe ka ibugo foto nwere ike ịme gburugburu.
Ntuziaka mbụ ga-apụta n'etiti ihe oyiyi ahụ, oke ihe ngosi ahụ dị mkpa yana symmetry, buru n'uche ihe osise nke foto ahụ ma mee ka elele isiokwu ahụ. Foto profaịlụ dị mma bụ nke na-ejighị ihe mejupụta, ọ kwesịrị ekwesị iji ọnọdụ panoramic.
Cheta ịhọrọ onyonyo nwere nha ndị mbụ Instagram họpụtara, ndụmọdụ bụ 100 x 100, 110 x 110 28 x 28 opekempe iji mkpebi ngosi. Iji jiri onyonyo akụkụ, obosara na ịdị elu ga-abụ 1.080 x 1.080.
Nkebi ahịrịokwu mbụ
Foto ndị na-enweghị ederede adịghị ka otuMaka nke a, ọ dị mkpa isoro ihe onyonyo jiri ihe ịchọrọ ikwu n'oge ahụ, ma ọ bụ otu ihe ahụ, jiri ahịrịokwu dabara adaba. Ingchọta okwu ndị ahụ anaghị adị mfe mgbe niile, ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ ọ kachasị mma ịmepụta uche nke ndị nwere ozi.
Enwere ọtụtụ ahịrịokwu izizi anyị nwere ike ịhọrọ ịnwe mmasị zuru oke, na nke a ọ ga-ekwe omume ịdọta ọha na eze, ọkachasị ndị na-eso gị. Nkebi ahịrịokwu ọ bụla ga-adabere na oge ahụ, yabụ ị ga-ahọrọ otu dabere n’ihe oyiyi ị kpebiri bulite n’oge ahụ.
Fọdụ ahịrịokwu mbụ maka Instagram bụ ndị a:
Na ihe ga-eme, mere gị
Onye ọ bụla nwere ike ịchịkwa ịhụnanya ma e wezụga onye ọ hụrụ
Obi nwere ihe ndi n’enweghi nghota
Egwu ahụ anaghị eme ka ị tufuo n'ụzọ
Na njedebe ị ghọtara na ịla ezumike nká adịghị efu, ọ hụrụ gị n'anya
Mgbe ụfọdụ, ọ na-esiri anyị ike ịghọta na ị banye n’otu akụkụ, ị ga-aharịrị nke ọzọ
Ezigbo enyi bụ onye ị ga-anwa anọnyere
Onye ọ bụla nwere ike ime ka ị kwaa ákwá, mana ọ na-ewe ihe ọgụgụ isi iji mee ka ị mụmụọ ọnụ ọchị
Ọnọdụ izizi maka foto gị
Ebe ọ bụla dị mma iji see foto dị mma, ma e nwere ebe ndị ka mma ị ga-erite uru ma bụrụ nke ezigbo ewu ewu n’etiti ụmụazụ gị. Successga nke ọma dabere n'ịhọrọ ebe, ma ọ bụ n'obodo gị ma ọ bụ n'èzí ya, ọ bụrụ na ịhọrọ nke ikpeazụ, enwere isi ihe ole na ole "instagrammable"
Spanish Spanish Machu Pichu: Ugwu nke La Masca, nke dị na Tenerife, dị ka Chi nke na-echekwa ndị bi na ya. Ugwu na okwute ndị jupụtara na ahịhịa bụ Masca. Otu akuku na akuko ihe omuma nke ndi ohi, site na obodo na mgbe iga n’uzo di anya i rutere osimiri mara mma.
Ebe a na-egwu ọla edo: Na El Bierzo (León) ndị ohu nke Alaeze Ukwu Rom meghere ha ka ha wepụ ọla edo niile. Ha nọ n'èzí, nke chestnut na osisi oak kpuchiri ha. Akpọwo ya dị ka Ebe Nketa Worldwa na 1997.
Osimiri Sakoneta: Osimiri Sakoneta bụ ebumpụta ụwa, ebili mmiri gosipụtara akara a. Ọ bụ na Deba na ọ bụ otu n'ime rarities na n'otu oge ahụ mara mma nke ukwuu. Ọ dị na Guipuzkoa, obodo dị n'ụsọ osimiri Basque. Ọ bụ ihe dị ka puku mmadụ ise bi na ya.
Ugwu, osimiri ma ọ bụ ihe ncheta ọ bụla: Enwere ọtụtụ mmadụ ndị kpebiri ịse foto na vidiyo ka bulite na Instagram na ugwu, n'ụsọ osimiri ma ọ bụ na ncheta. Enwere ike iji nke ọ bụla bulite foto ma nweta ọtụtụ mmasị na onyonyo etinyere.
Foto izizi nke ndị mmadụ
Obi abụọ adịghị ya, ịse foto dị mma pụtara iji igwefoto dị mma, n'ụdị a ị nwere ike igwu egwu n'echiche gị, ma ọ bụ iji ekwentị ma ọ bụ igwefoto dijitalụ. Enwere ezigbo echiche iji nwee ike ịse foto dị iche, ma ọ bụ site n'ịgbanwe ihe mmetụta ahụ, na-agbakwunye ihe n'elu ha na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Na-ewere foto nke mbụ nke ndị mmadụ, ịnwere ike iji akpa rọba, jide ya nke ọma ma mepụta udi maka oghere iji nweta ngosipụta, dị mma ma ọ bụrụ na ị na-ese foto na mpaghara. I nwekwara ike ime onu ogugu di iche na mado ya na contour nke lens, inwere ike iwere onyonyo nwere udiri, jiri nke a i nwere ike wepu akuku nke ogbo na onyonyo.
Nwekwara ike igwu na ndò, n'ihi na nke a ị nwere ike ịme ihe, mepụta ntụgharị uche wee mee monta nwere ọnọdụ iji mee ka ọ dị mma. Can nwere ike iji karama mpempe ma mepụta nsonaazụ iko, yana ndị ọzọ dị ka a ga - asị na ọ bụ spyglass, ichetụ n'echiche nwere ike enweghị njedebe iji were foto izizi.
Iji njiri dị iche na onyonyo ọ bụla na-eweta nsonaazụMara ndị kachasị mma ga - eme ka ị nweta ọtụtụ ọkacha mmasị yana karịa ndị niile tinye ndị na - eso ụzọ na Instagram. Ihe dị mkpa bụ iji nke ahụ na-aga nke ọma ka ị nwee ike bụrụ onye nwere mmetụta.
Otu n'ime ihe eji eme ihe na Instagram bụ ime ka ọdịdị ahụ dịkwuo mma, ịre onwe gị iji nyere aka mee nke a ma lekwasị anya na anya dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji foto dị mma. Ọnọdụ ọzọ nke na-egosi nsonaazụ ọma bụ na-eguzo na profaịlụ, ọkachasị mgbe ịchọrọ ile anya slimmer, lee, enwere ike ịtọ foto ahụ na ngụ oge ma ọ bụ jiri onye ọzọ were ya.
Ndị ọzọ na-arụkarị ọrụ bụ ịnọdụ ala ma gosi ala ahụ, ma na-enweghị isi na etiti pụọ ka mmadụ wee pụta mgbe niile na oyiyi ahụ, ma na ala, na nkume, wdg. Enwere ike gbanwee ọnọdụ a, ma ọ bụ n'ụdị ụdị yoga, ụkwụ gbagọrọ agbagọ ma ọ bụ ụdị dị iche iche iji bulite foto na netwọkụ mmekọrịta.
Otu n’ime ntọala zuru oke iji were foto izizi tinye ha na Instagram Ọ bụ ụlọ nke gị, maka nke a ihe kachasị mma bụ icho mma ebe ị na-ese foto gị. Nwere ike nweta ọtụtụ ihe na mmewere ọ bụla, maka nke a ịchọrọ obere echiche.
Ọ dịghị ihe dị jụụ karịa ịse foto gị na anụ ụlọ gị, ọ bụrụ nkịta, nwamba ma ọ bụ nke gị na ya bi, maka nke a na-edozigharị onyonyo nke abụọ ka o wee pụta karịa ndabere. Enyo onwe onye bụ ihe na-ewu ewuMaka nke a, naanị ịnọdụ ala n'ihu enyo ahụ, jiri ekwentị mkpanaaka gị wee see foto, ọtụtụ n'ime ha nwere ihe ịga nke ọma na netwọkụ mmekọrịta a.
Debe ihe okike bụ ihe ọzọ na-amasị ndị mmadụMaka nke a, naanị ịkwesịrị iji uwe dị mma, ekwentị wee weghara ihe niile na ngụ oge n'onwe ya, ọ kachasị mma ka ị ghara iji igwefoto dị n'ihu. Ihe ndị kpochapụwokwara, ị nwere ike iji vinyl, ndekọ nke ọkacha mmasị gị na-amasị gị na ihe omume ntụrụndụ ndị ọzọ ịchọrọ ijide ya ma bulite ya na Instagram.
Enwere ike iji ha foto collage onye ngwa ọdịnala, dezie foto na ekwentị mkpanaaka, nri foto bulite, na-eme ihe niile ezigbo foto na ekwentị mkpanaaka. Enwere ike ịkekọrịta onyonyo ahụ ka ha nwee ọganiihu na Instagram ma ọ bụrụ na itolite na ndụmọdụ ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu esi eme foto mbu na Instagram
Etu esi akpọ ndi mmadu ka ha bia na Telegram dị iche iche na koodu QR